Qaybtii 2aad’ Maareeyahay Deakada Berbera Ma Masuul Qaran Mise Gacan-yare Dp-world u Adeega | Marsa News
Qaybtii 2aad’ Maareeyahay Deakada Berbera Ma Masuul Qaran Mise Gacan-yare Dp-world u Adeega
September 14, 2018 - Written by editor marsan
Hargaisa:(Marsanews) Sida aynu ku soo sheegnay qormadeenii tan ka horaysay waxa xusid mudan ka uu yahay maareeyaha ay dekada berbera u baahan tahay iyo waliba xilkasnimada iyo waayo-aragnimada looga baahan yahay nooca ay tahay.
Dabcan aqoontu waa midka uu shaqsigu ku guto waajibaadkiisa shaqo uguna adeego hadba cida u igmatay hawsha uu maamulaha ka yahay.
Maareeyahay haatan maamula dekada berbera Md, Siciid waxa ka muuqda maamulkiisa galdaloolooyin u baahan aqoontii iyo wayo-aragnimadii gufayn lahayd oo iyada gabi ahaan ba uu ka aradan yahay, waxaana tusaale kuugu filan guud ahaan sida ay tahay nidaamka maamul ee xiligan ka jira dekada berbera haday tahay xafiiska uu maamulo iyo haday tahay shaqo ahaan inta hoos timaadaba.
Waxa muuqata in hoos u dhac wayni ku yimid xiligan dhinicii wax soo saarka dhaqaalaha iyo habsami u socodkii shaqada dekada, taas oo ay sabab u tahay maareeyahay xiligan ka arimiya oo aan lahayn aqoontii iyo Khibradii ama waayo-aragnimdii maamulka hawlaha dekadaha.
Wararka qaar ayaa iyagu sheegaya in wakhtiyada gudashada shaqada qaranka uu halkaa maareeyuhu uga hayo aanu inta badan ba joogin, sida oo kale ilo wareedyo lagu kalsoon yahay ayaa iyaguna xaqiijinaya in uu badiba ku mashquulsan yahay waxay ugu yeedheen hanti urursi oo uu ku hawlan yahay dilaalida hawlo badan oo shirkada Dp-world meesha ka fushato oo aan si rasmiya loo ogayn hawlahaasi waxa ay yihiin.
Halkan aragtiyaha qaar ay sheegayaan in xaafad ku taal magaalada hargaysa oo lagu magacaabo Magaalo Ugaaso inuu wakhtigiisa ugu badan ku sugan yahay halkaas oo sida la sheegay arimo kala duwan oo dhawra uu ka fushado.
Si kastaba ha ahaatee waxa biyo kama dhibcaan ah in maareeyahay dekada berbera u baahan tahay yahay mid ku suntan wax qabad iyo xilkasnimo ay u deertahay aqoontii maaraynta dekadaha iyo wax soo saarka.
C/risaaq Maxamed Axmed